Ikhaya elithule ngasemfuleni eduze nemizila namachibi
Laporte, Minnesota, i-United States
I-ikhaya eliyindawo yokuhlala ephelele ibungazwe ngu-Pete
Ikhaya lethu liseduze ne-Leech Lake, ukuhamba ngebhayisikili, ukushushuluza eqhweni, i-snowmobile, kanye nemizila yamasondo angu-4. 6 miles ukuya edolobheni Walker.Uzoyithanda indawo yethu ngoba isendleleni ethule, eyimfihlo, i-ambiance enhle kanye nokuba seduze kwemisebenzi eminingi yangaphandle.Ukuphuma kwelanga kuhle kusukela kuvulandi wezinkathi ezi-3. Sinomdlalo wesikhwama sikabhontshisi, nomgodi wesicathulo samahhashi uyatholakala.Kuhle kubashadikazi, abantu ababodwa, abahambi bebhizinisi, imindeni, futhi siyabathanda izilwane ezifuywayo (uma beqeqeshwe KAHLE).
Ngingaphinde nginikeze izinkonzo zomhlahlandlela wokudoba okungezona uchwepheshe, kodwa onolwazi, i-Leech Lake, i-Kabekona Bay, kanye ne-Benedict Lake ngama- $200 ngamahora angu-6.Kubandakanya isikebhe sokuhlalisa abantu abangafika kwabangu-3 ku-2014 Lund 1725 Tyee kuhlanganise ne-bait.Ukutholakala kuncike ekubhukheni kwangaphambilini. Ungakwazi futhi ukudoba izinhlanzi ogwini ezindaweni eziningi ezizungeze ichibi.
Sitholakala emgwaqeni ozimele osetshenziswa abanikazi bezindlu abangu-8. Ikude kahle, nokho ingaphansi kwemayela elingu-1/4 ukuya ku-MN hwy 200 kanye ne-Cty Rd 38
Ngizotholakala cishe nganoma yisiphi isikhathi phakathi kuka-6 ekuseni no-9 p.m.
UPete Ungumbungazi ovelele